पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने हो ? यसो गर्नुहोस्… – Karnalikhabar
शुक्रबार, अशोज ६, २०७४
पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने हो ? यसो गर्नुहोस्…
मङ्लबार, भदौ २०, २०७४ मा प्रकाशित
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् ।
काँक्रो बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ ।
धनियाँको जुस यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ ।
एलोभेरा जुस एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बोसो कम हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको समस्या पनि घटाउँछ ।
ग्रिन टी ग्रिन टीमा एन्टिएक्सिडेन्ट्स हुन्छ । पेटको बोसो घटाउन भने विना चिनीको ग्रिन टी पिउँदा फाइदा हुन्छ । यसले शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पनि सघाउँछ । त्यसैगरी कागती मिसाएर खाँदा टक्सिनबाट पनि छुट्कारा मिल्छ ।
अदुवाको रस प्रतिदिन एक चम्चा अदुवाको रस पेट कम गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ । यसले शरीरको बोसो समेत बर्न गर्न सघाउँछ । खानपानमा सन्तुलन र नियमित व्यायाम फिट रहने सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन् । स्रोतः -स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अघिल्लो - किन बोल्दैनन् काजोल र करण जोहर ?
देवर भाउजु अापत्तीजनक अवस्थामा फेलापरे पछि गाउँमा हंगामा, यस्तोसम्म गरे गाउँलेले - पछिल्लो
यौन शक्ति बढाउन सबैभन्दा उपयोगी र स्वस्थ्यकर मानिन्छ यार्सागुम्बा, जो नेपालमै पाइन्छ
राती राम्रोसँग निन्द्रा लाग्दैन ? आजै अपनाउनुस् यी तरिका
यी हुन् ४ तरिका जसबाट हुन्छन् एकै दिनमा गायब मुसा, उडुस, झिंगा र माउसुली घरभरीका